माओवादी कसरी भताभुंग भयो? बाबुराम र उपेन्द्रको रोचक सवाल-जवाफ - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
माओवादी कसरी भताभुंग भयो? बाबुराम र उपेन्द्रको रोचक सवाल-जवाफ
अशोक राईः उपेन्द्रजी पनि पहिले एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, म पनि एमाले छाडेर यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। मैले छाडेपछि त्यो पार्टी झन् मौलाएर गयो।
उनले थपे, ‘पोलिटिक्स भनेको सैद्धान्तिक पाटो त हुँदै हो, तर व्यावहारिक र अन्य पार्टी पनि हुन्छ। अन्तरिम अवस्थाका लागि यो (द्विअध्यक्षीय) प्रणाली अपनाएका हौँ, हामी कसैले कसैलाई पनि नेता मान्न तयार छौँ। कुनै पार्टी (राजपा) मा ६ अध्यक्ष छन्, सबै एउटै समुदायका। कुनै पार्टी (नेकपा) मा दुई अध्यक्ष छन्, त्यहाँपनि एउटै समुदायका। तर, हाम्रोमा उपेन्द्र यादवजी मधेश राजनीतिबाट आउनुभयो, त्यहाँ मधेशका सेन्टिमेन्ट छ। उहाँ अध्यक्ष नहुँदा ‘ल, अहिलेसम्म पहाडले मधेशमाथि शासन गर्यो, फेरि उपेन्द्रले पार्टी लगेर पहाडेलाई बुझाइदियो, आत्मसमर्पण गर्यो भनेर उहाँको घाँटी समात्ने। यतातिर पहाडे मानसिकता कस्तो छ भने फेरि, मधेशी भनेको भारतीय हुन्। अलिकति श्याम (कालो) बर्णका मान्छे नेपाली होइनन्। बाबुरामले हिजो संविधान जारी भएपछि मधेशमा जाने बित्तिकै भारतले उचाल्यो भनेर तपाईंहरुले नै परोक्ष रुपमा उठाइराख्नु भएको छ नि–बाह्यशक्ति आदि इत्यादि भनेर। उपेन्द्रजी अध्यक्ष बनेपछि त केही भन्नै परेन– यो त भारतको दलाल हो भनिदिए भइहाल्यो। बाबुरामले उपेन्द्रलाई अध्यक्ष बनाएपछि, ‘ल, छोड्यो बाबुरामले भारतको आदेशमा, पुरै लगेर बुझाइदियो’ भनेर फेरि यहाँ बसिखानु हुँदैन। हाम्रै भाई–खलक जुन खसआर्य समुदाय छ, त्यसको एकपक्षीय राष्ट्रवाद जागिहाल्छ। त्यसैले, अन्तरिम व्यवस्थाको रुपमा दुई वटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको हो।’
प्रकाशित १ जेठ २०७६, बुधबार | 2019-05-15 20:24:12